Wink Bingo review Mey 2022 | Bingo77 Madagascar
Bingo efi-trano: 21
Efa nandinika Wink Bingo araka ny bingo toerana 'fandaharana rafitra ary nanome izany ho TSARA bingo toerana. Izany hoe ianao mety hanana traikefa Tsara raha misafidy ny hilalao amin'ity tranonkala ity. Mba hanamarihana Wink Bingo tahaka ny TSARA, efa nandinika ny laza ny fahazoan-dalana fahefana, isam-bolana ny isan'ny mpitsidika toerana sy nandinika ny tombontsoa 'Policy. Fantaro kely ny tsipiriany eto ambany ary manapa-kevitra na an-tserasera izany Casino mendrika mitsidika na tsia.
Wink Bingo dia naorina teo an ary amin'izao fotoana izao tompony 888 Holdings plc . Izany miasa eo ambany fahazoan-dalana, navoakan'ny UK Commission Filokana sy ny filokana Gibraltar Kaomisera - Samy manam-pahefana fanta-daza fahazoan-dalana. Ny toerana dia manana 21-tserasera bingo efitra sy ny Kilonga fiteny anglisy.
Manohana: 10 am-2am, isan'andro
Bingo Wink ny zava-dehibe toerana Policies, anisan'izany ny tombontsoa sy Ny famoizana Policy, dia nampiseho mazava tsara sy ahitana tsipiriany vaovao. Mba manokatra kaonty ianao, dia ho angatahana mba hanaporofo ny maha amin'ny telefaonina, ary mety ihany koa ho nangataka mba mampakatra ny maha antontan-taratasy. Miorina amin'ny ny vaovao momba izany sy ny toerana ambony, dia fahazoan-dalana Wink Bingo na ho beginners sy ny matihanina amin'ny aterineto bingo mpilalao. Izany no tsara Casino-tserasera ary tena mety dia hanana traikefa amin'ny lafiny tsara miloka eo aminy.
Ny marika an'ny miloka goavam-be 888 Holdings plc
Manana maro bingo efitra
Fialana famerana ho an'ny tsy UK mpilalao
Mametra mpilalao avy any amin'ny firenena sasany